Sampatti News मेलम्ची पानी वितरणको औपचारीक उद्घाटनमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, के के भनिन्? (पूर्णपाठ) - Sampatti News
मेलम्ची पानी वितरणको औपचारीक उद्घाटनमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, के के भनिन्? (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्चीको पानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पानीको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झदै गरेकी हुन् । यद्यपि, मेलम्ची आयोजनाको परिकल्पना पाँच दशक अगाडि नै भएको उनले स्मरण गराईन् ।
भृकुटीमण्डपमा नवनिर्मित ढुंगेधाराका टुटी खोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयोजनाको उद्घाटन गरेकी हुन् । धारा उद्घाटनपछि राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन यस्तो छः
प्रकाशित मिति:April 2, 2021